अलविदा तुम्बा ! – Radio Miteree (Latest News)
अमरकुमार नेम्वाङको परिचयः
स्वर्गीय अमरकुमार नेम्वाङ पाँचथर जिल्ला साविक पौवासार्ताप गाँउ पञ्चायत वडा नम्वर ३ हाल फाल्गुनन्द गाँउपालिका वार्ड नम्वर ३ स्थित स्व. नरविर (नयेन्द्रराज) नेम्वाङ र वहाँका ७ आमाहरु मध्ये जेठी माता स्व. मोतिहाङमा (थाम्सुहाङ) नेम्वाङको माहिला शुपुत्रको रुपमा विक्रम सम्वत १९९८ साल श्रवण २३ गतेका दिन जन्म भई मितिः २०७५ साल माघ २६ गतेका दिन ७७ वर्षको उमेरमा असामयिक निधन हुनु भएको हो । वहाँहरुको परिवारमा ११ दाजुभाई र ११ दिदि बहिनीहरु रहेकोमा हाल ४ दाजुभाईको देहान्त भइ सकेको छ भने दिदिबहिनीहरु भने सबै जिवित हुनु हुन्छ । हाल वहाँको परिवारमा धर्मपत्नी चन्द्रकला थाङदेन (नेम्वाङ), छोराहरुः मुनिन्द्र, सुनिन्द्र, गुनिन्द्र र छोरी इन्दिरा र ३ बुहारीहरु र ६ जना नातिनातिनाहरु रहेका छन ।
वहाँको पालामा नेपालमा बिघालय र कलेजहरु खासै खोलिएका थिएनन् । त्यसैले सानै उमेर देखि अध्ययनको क्रममा भारतको दार्जिलिङ बस्नु भयो र सेन्जोसेव कलेजबाट स्नातक पुरा गर्नु भएको थियो । अनि स्नाकोतर भने २०२५ सालमा त्रिभुवन विश्व विघालय किर्तिपुरबाट हासिल गर्नु भएको थियो । अध्ययन समाप्त गरे पश्चात पुनः वहाँ गाँउनै फर्कनु भयो र गाँउमानै गाँउका साथीभाई लगायत दाजुभाईहरुसँग रमाउनु भयो ।
गाँउमा समाजसेवा, राजनिति र विकासका कार्यहरुमा विस्तारै पाइला चाल्न थाल्नु भयो । सोहि क्रममा २०३२ सालमा तत्कालिन चिलिङदिन गाँउ पञ्चायतको प्रधान पञ्च हुंदै जिल्ला पञ्चायत पाँचथरको उपसभापति हुनु भयो । त्यसरीनै २०३८ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचनमा पाँचथरबाट उम्मेद्धार बन्नु भयो तर बिजय भने बन्न सक्नु भएन । अनि पुनः २०३८ देखि २०४२ र २०४२ देखि २०४६ साल सम्म पौवासार्ताप गाँउ पञ्चायतको प्रधान पञ्च २ पट्टक बन्नु भयो ।
२०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना पश्चात नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट २०४९ देखि २०५४ र २०५४ देखि २०५८ अषाढ मशान्त सम्म पौवासार्ताप गाविसको अध्यक्ष २ पट्टक बन्नु भयो । पाँचथरमा पनि २०५९̸०६० देखि माओवादी जनयुद्धले अलिक बडि प्रभाव लिन थाले पछि पौवासार्ताको घरमा बस्न केहि असुरक्षीत हुने संकेतहरु देखा पर्न थाले पछि केहि बर्ष काठमाण्डौंमा र अमेरिकामा बसोबास गर्नु भएको थियो । अनि पुनः शान्ति सम्झौता पश्चात नेपाल फर्कनु भयो । नेपाल फर्कनु भए पछि पुनः आफ्नो गाँउ पौवासार्तापमानै बस्न थाल्नु भयो । नेपालको नयाँ संविधान २०७२ को प्रावधान अनुसार राज्यको पुनर संरचनाको क्रममा साविक ६ गाविसहरु समायोजन गरेर फाल्गुनन्द गाँउपालिका स्थापना भएको हो । २०७४ साल अषाढ १४ गतेको स्थानीयतहको निर्वाचनमा फाल्गुनन्द गाँउपालिकाको प्रमुख पदमा नेपाली काँग्रेसको तर्फवाट अत्यधिक बहुमतले बिजय हुनु भएको थियो ।
अमरकुमार नेम्वाङको थप साहित्यिक परिचयः
अमर नेम्वाङ सालिन ब्यतित्व र लोकतान्त्रिक बिचार र शैलिका हुनु हुन्थ्यो । वहाँले सवैलाई बोलाउदा आफु भन्दा सानाहरुलाई पनि तपाईनै प्राय भन्नु हुन्थ्यो किनकी मेरो पहिलो भेट हुँन्दा म १९ वर्षको थिए तर वहाँ लगभग ५० वर्षको हुनु हुन्थ्यो अनि म भतिज पनि तर पनि मलाई बोलाउदा तपाँईनै सधैं भन्नु हुन्थ्यो । वहाँको कृयाशिल्ता राजनिति र समाज सेवाको अलावा अध्ययनशिल, साहित्यकार र अवल स्रष्टा समेत हुनु हुन्थ्यो । साहित्यका नयाँ नयाँ आयामहरुको वारेमा धेरै जानकार समेत वहाँमा थियो । नेपाल सरकारको तर्फबाट २०७५ सुप्रवल जनसेवा श्री पदकवाट बिभुषित समेत हुनु भएको थियो ।
अमर नेम्वाङका ३ वटा प्रकाशन कृतिहरुः सम्झनाका तरेलीहरु, अमेरिका भ्रमणका सम्झनाहरु निवन्ध संग्रह र एक साँझको अवशान कविता संग्रह हुन । यी कृति र रचनाहरु अव्वल दर्जाको रहेको हरेक पाठकहरुले टिप्पणी गरेका छन । वहाँको प्रकाशित कृति मध्ये सम्झनाका तरेलीहरु निवन्ध संग्रह उतकृष्ट रहेको छ । इको राइटिङ शैलिमा लेखिएको र मदन पुरष्कारको लागि नोमिनेट हुँदा टप टेनमा छनौट भएता पनि पुरस्कार बिजेता भने गर्न सकेन । हाल त्यो निवन्ध संग्रह प्रध्यापक डा गोबिन्दराज भट्टराईले अंग्रेजीमा अनुवाद गरी रहनु भएको छ । यी बाहेक अन्य अव ३ वटा जति कृतिहरु तयार भई प्रकाशन गर्ने दृढ इच्छा शक्तिका साथ राजनिति र साहित्यक लेखनलाई संगसंगै लैजाने क्रममा अवशान हुने दिन सम्म हुनु हुन्थ्यो ।
तुम्बा संग दुखःद क्षणका अनुभुतिहरुः
२०७५ साल माघ २६ गतेको दिन म लगभग बिहान ८ वजेतिर मेरो रुमबाट उठेर मिलन केन्द्र नेपालको कार्यालय फिदिममा पुंगे । फाल्गुनन्द गाँउपालिका २ नम्वर वडाका वडा अध्यक्ष बहादुरसीङ नेम्वाङसंग पहिलो भेट भयो । अनि मलाई हतार हतार बहादुरसीङले सुनाउनु भयो । आज मइले अमर तुम्बासंग बिहान ५.३० देखि ६ वजे सम्म आधा घण्टा फोन वार्ता गरें भनेर । फोनमा कुरा समग्र गाँउपालिकाको वारेमा र बिभिन्न दातृ निकायहरुसँग सहकार्य गरी सहयोग भित्र्याँउने सम्वन्धमा भएको थियो । अत्यन्त उत्साह र सकारात्मक पक्षमा तुम्बाले मलाई जवाफ दिनु भएको छ भनेर खुशीका भावहरु सहित मलाई सुनाए । अनि तुरुन्तै अइन्द्रसुन्दर नेम्बाङलाई समेत सुनाए । गाँउपालिका अध्यक्षले एउटा जरुरी शिफारिस पत्र आजै हस्ताक्षार गर्नु पर्ने पनि थियो । किङ बाउण्डिङ फाउण्डेशन बेल्जियमलाई लागत साझेदारीको प्रतिवद्धता शिफारिस पत्रमा हस्ताक्षार । त्यसको लागि वडाध्यक्ष र तुम्बाको सहमति भएको थियो । सोहि दिनको साँझ वडाहरुको कार्यक्रम समापन पश्चात बेलुका आफ्नै निजि निवास पौवामा गएर हस्ताक्षर गर्ने तर केवल सपना मात्र भयो । पुरा हुन सकेन ।
२६ गतेको दिन देश भरी पानी परेर केहि मौषममा सुधार हुने क्रममा थियो । म पाँचथरको सदरमुकाम फिदिमको होटल युकेको हलमा फिदिम नगरपालिका ४ को आर्थिक सहयोगमा संचालित प्रस्तावना लेखन सम्बन्धि तालिमको सहजिकरण गर्दै थिए । अमर तुम्बा भने उता फाल्गुनन्द गाँउपालिकाको ५ नम्वर वडाको आर्थिक सहयोगको क्षमता अभिवृद्धि तालिम उदघाटन सत्रको प्रमुख अतिथि हुनु भएको रहेछ । सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको मन्तब्य राख्ने क्रममा शायद अलिक असजिलो तथा अप्ठयारो महशुस गर्नु भएछ क्यारे केहि जिज्ञासाहरुको छोटोमा जवाफ दिएर आफ्नो मन्तब्यलाई टुग्याँउनु भएछ र पुनः आफ्नो कुर्सीमा बस्दा बस्दै हट एट्याक भएछ ।
मलाई दिनको ३ बजे फाल्गुनन्द ५ फाकतेप घुर्बिसे पञ्चमी देखि मेरो काका पर्ने बलिराज नेम्वाङले ४ पट्टक फोन गर्नु भएको रहेछ तर तालिमको आचार संहिता अनुसार मेरो फोन साइलेन्समा राखेको थिंए । त्यसैले गर्दा तुरुन्त मइले फोन रिसिभ गर्न सकिन । तालिमको अन्त्य भए पश्चात मइले ४ वजेतिर कल ब्याक गरे । बलीराज नेम्वाङ काकाले मलाई जवाफ दिनु भएको थियो हाम्रो अमर दाई अध्यक्ष आज घुर्बिसेको कार्यक्रममा ढल्नु भएछ भनेर ।
म एकछिन अनुतरित भए एकछिन पछि अनि वहाँ अहिले कता हुनु हुन्छ ? भने । यहाँ देखि थप उपचारको लागि एम्बुलेन्सबाट पठाई सकेका छौं भनेर जवाफ दिनु भयो । अनि को को संगै हुनु हुन्छ त ? भने मणि जी र कमल लगायतका नाम लिनु भयो र मइले मणी जीलाई कल गरें उठाउनु भयो तर हामी इलामको नेपालटार पुग्दै छौ भनेर जवाफ दिनु भयो । म अति हतार थिंए अमर तुम्बाको स्वाश्थ्यको वारेमा जानकारी लिन ।
अमर तुम्बाको स्वास्थ्यको जानकारी लिने हतारो क्रममा फाल्गुनन्द ६ का वडा अध्यक्ष नारायण आङदेम्बेसंग पनि मेरो वार्ता भयो वहाँसंग पनि अपुरो सुचनानै थियो । उपाध्यक्ष देवित्रा आङदेम्बेलाई कल गरे वहाँको लागेन । अनि गाँउपालिका कर्मचारी राजेन्द्र भट्टराईलाई कल गरें । वहाँले अलिक धेरै सुचना दिनु भयो र म अलिक हतोत्साहित पनि भए तर पनि निरन्तर अन्तिम सुचना प्राप्त गर्न लागि रहें । तथापी मेरो बशमा थिएन समय र परिस्थिती । समय छिप्दै गइरहेकै थियो । परिस्थितिले ब्रिग्रता ल्याउँदै थियो । अनि पुनः मणी जीलाई सोधें अमर तुम्बाको स्वाश्थ्यको वारेमा कस्तो छ ? अवस्था भने सुधार देखिएको छैन भनेर जवाफ दिनु भयो ।
म अनि अलिक स्तव्ध र गम्भिर भए । कतै अमर तुम्वाले हामीलाई सुटुक्क छाडेर र त जानु भएन भनेर । किनकी मेरो आमाले पनि ५० वर्षको उमेरमा २०५६ साल बैशाखमा प्रत्यक्ष दर्सीहरुले सुनाए अनुसार भैंसीलाई पानी दिनको लागि पानी थापी रहनु भएको समयमा अचानक ढल्नु भएको थियो र हामीलाई एक्कासी छाडेर जानु भएको थियो । पुनः मइले त्यहि घट्नाको याद आयो ।
यस पछि अमर तुम्बाको साखे भतिजहरु क्रमशः धर्मेन्द्र, नन्दहाङ र पंकजलाई कल गरे । अमर तुम्बाका छोराछोरीहरु भने प्राय सबै नेपाल बाहिर रहेकाले एक डेढ घण्टाको अवधिमा सम्पर्क गरीन तर कता न कता बाट अहिलेको संचारको युगमा मेसेज पाइसकेकै थिए होला । उनीहरु सवैले दुखःद खबर सुनि सकेका रहेछन । मइले ६ देखि ७ पट्टक भन्दा धेरै कल धर्मेन्द्रलाई गरे तर फोन उठेन । सायद यहि खबर सुनेर हतारमा बाटोमा भएकोले फोन उठाउने फुर्सद भएन होला । अनि बिर्तामोडमा आएर मलाई धर्मेन्द्रले कल गरे । नन्द दाई तुम्बाले हामीलाई छोड्नु भयो रे नी भनेर । मइले पनि त्यहि सुन्दै छु तर पुस्टिको खबर भने पाइ सकेको छुइन भने ।
अनि पुनः मणि जीलाई कल गरें । मणी जीले हामी इलाम अस्पतालमा छौ भनेर भन्नु भयो । म अलिक रिसाए पनि किनकी यस्तो गम्भिर स्वास्थ्यको उपचार इलामको अस्पतालले गर्न सक्दैन भनेर । तर मणी जीको बोलाइको शव्द र भावलाई बुझ्दा डाक्टरले थप उपचारको लागि आवश्यक छैन भन्ने शन्देश दिइ सकेका रहेछन ।
अनि मइले नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति पाँचथरका सभापति नरेन्द्र कुमार केरुङलाई कल गरें । वहाँले धेरै एक्साइज गरी सक्नु भएको रहेछ । थप गुणस्तरीय अमर नेम्वाङको स्वास्थ्य उपचारको लागि तुरुन्त काठमाण्डौं पुर्याउनु पर्छ भनेर हेलिकप्टर चार्टरको लागि समेत व्यवस्था भइ सकेको रहेछ । अनि नरेन्द्र जीले मलाई भन्नु भयो । नन्द सर इलामबाट तुरुन्त र चाँडो भन्दा चाँडो झापा पुर्याउने पहल गर्नोस भन्नु भयो । थप गुणस्तरीय उपचारको लागि काठमाण्डौं लानु पर्छ भन्नु भयो ।
अनि मइले पुनः अमर तुम्बाको स्वास्थ्यको वारेमा थप पुष्टिको लागि फोन कलमा व्यस्तनै रहें । अन्य साथिहरु पनि त्यस्तै ब्यस्तनै हुनु हुन्थ्यो । अमर तुम्बाको जेठा दाइको छोरा नन्दहाङलाई पुनः कल गरे । दाई म पनि इलाममा हुने आफन्तहरु समेतलाई अस्पतालमा गएर तथ्य कुरा बुझ्न लगाई राखेको छु भने । म पुस्टि खबर आउने बितिकै दाइलाई जानकारी गर्छु भने पछि हामीले फोन राख्यौं । लगभग १० मिनट पछि नन्दहाङले मलाई कल गरे । दाई काकाले हामीलाई छोड्नु भएछ भनेर । इलाम नगरपालिकाको उपमेयर समेत रहनु भएका शुसिला नेम्वाङ निजका बहिनि फुपुले भन्नु भयो भनेर नन्दहाङले मलाई भने ।
अनि त्यस पश्चात म फोन कल गर्न छोडें । त्यो समय अवधि भित्रमा धेरै सामाजिक संजालहरुमा भावपुर्ण श्रदान्जलीहरु छ्याप्छ्याप्ती आइसकेका थिए होला । तर त्यस दिन मइले फेसबुक चलाइन । अनि एक जना मेरो साथी काठमाण्डौंकोले साँझ खाना खान्दै गर्दा कल गरे के छ ? साथी भनेर । तर मइले नर्मल जवाफ दिए ठीक छ । खाना खान्दै छु मात्र भने । मइले यो भन्दा धेरै जवाफ दिन सकिन । तर वहाँले सामाजिक संजालहरुवाट थाहा पाइ सकेर थप पुष्टिका लागि कल गरेका रहेछन ।
अनि म हाम्रो लिम्बु संस्कार र रिति अनुसार कहिले अन्तिम दाहा सँस्कार गर्ने भनेर निरन्तर सम्पर्कमा रहें । म र बहादुरसीङ नेम्वाङले २७ गते बिहानै इलाम अस्पताल सम्म जाने र तुम्बालाई हेर्ने सल्लाह गरेका थियौ । अनि मइले धर्मेन्द्रलाई फोन गरेर सोधें अब सव कहाँ राख्ने ? भनेर । इलाममा आइस छैनरे दाई । मुनिन्द्र दाई र सुनिन्द्रलाई पर्खने समय सम्म सव राख्नै पर्ने भयो । त्यसले गर्दा अहिले साँझ्नै बिर्तामोड झारेर बिएमसी अस्पतालमा राख्ने भने पछि भोलिको यात्रा हाम्रो रद्द भयो ।
अनि छोराहरु २८ गतेका दिन साँझतिर अमेरिका देखि मुनिन्द्र र युके देखि सुनिन्द्र पनि आई पुगे बिर्तामोड झापाको बिएमसी अस्पतालमा । पारिवारीक सेडुल अनुसार माघ २९ गते फाल्गुनन्द गाँउपालिकाको कार्यालय फाक्तेपमा श्रदान्जलीको लागि ११ वजे पुर्याएर २ वजे देखि निजि निवास घरमा राख्ने थियो । सार्वजनिक पदधारण गरी रहेको ब्यत्क्तिहरुलाई पोष्टमार्टम गर्न सरकारी नियम अनुसार बाध्यकारी प्रावधान रहेछ । तर त्यो सम्बन्धमा सबै अनविज्ञ भएकोले पारिवारीक सेडुल अनुसार दाहा संस्कारमा केहि ढिलाईहरु भयो । तथापी अमर तुम्बाको पार्थिव शरिरमा अन्तिम श्रदान्जली ब्यक्त गर्न पाँचथर जिल्लाका सबै स्थानीयतहका प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यकारी अधिकृतहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो । त्यस्तै इलाम जिल्लाको इलाम नगरपालिका मेयर, फाकफोकथुम र रोङ गाँउपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख समेतको श्रदान्जलीमा उपस्थित रहेको थियो ।
तर अमर तुम्बाको पार्थीव शरिरलाई श्रदान्जलीको लागि गाँउपालिका, नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति पाँचथर, जिल्लाका बिभिन्न दलका नेता, कार्यकर्ता, जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुख, शुभेच्छुक, जिल्लाका श्रष्टाहरु र गाँउघरका छरछिमेकीहरु समेतले लामै समय अन्तिम श्रदान्जली अर्पण गर्ने अवसर मिल्यो । अमर तुम्बाको अन्तिम पार्थिव शरिरलाई अन्त्य गर्ने काम वहाँहरुकै पारिवारीक घाट पौवासार्ताप र चिलिङदिनको संगम स्थल त्रिवेणी दोभानको घाटमा २०७५ साल फागुन १ गते सम्पन्न भयो ।
अमर तुम्बाको श्रदा र सम्झनाको लागि पाँचथरका ८ वटै स्थानीयतह र इलाम जिल्लाको इलाम नगरपालिका र फाकफोकथुमले समेत श्रदान्जली अनुदितको लागि मितिः २०७५ साल फागुन १ गते स्थानीयतह अन्तर्गतका सवै कार्यालयहरुले सार्वजनिक विदा गरेका थिए ।
यिनै शब्दहरुमा मेरो श्रद्धाञ्जली अनुदित गर्दछु । अल्बिदा मेरो अमर तुम्वालाई ! बाँकि भाग २ मा
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशवासीका नाममा गरेको सम्वोधनको पूर्ण पाठ के यी हाम्रा योजनाहरु, नारायण गोपाल–अरुणा लामाले गाएको गीत जस्तो– ‘… त्यो तारा मात्रै हैन, जुन पनि झारी दिउँला’ भने जस्तो हो र ?
१८ किलो अवैध सुन फेला परेकै दिन थप ५ किलो ६ सय ग्राम सुन बरामद